Muxuu ka yiri Frenkie de Jong kaddib imaatinkiisa kooxda Barcelona? – Gool FM
Muxuu ka yiri Frenkie de Jong kaddib imaatinkiisa kooxda Barcelona?
Dajiye July 6, 2019
(Barcelona) 06 Luulyo 2019. Xiddiga khadka dhexe reer Holand ee Frenkie de Jong ayaa kasoo muuqday shirkiisa jaraa’id ugu horeeyay, kasoo loogu soo bandhigayay saxaafada inuu yahay ciyaaryahan cusub ee kooxda Barcelona ah.
Wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa daabacay hadalada Frenkie de Jong kaddib shirkii jaraa’id uu kaga soo muuqday garoonka Camp Nou waxaana ka mid ahaa:
“Waxaan mar walba ku riyoon jiray inaan u ciyaaro Barcelona, waa wax wanaagsan inaan halkan joogo, inaan u ciyaaro Barca waa riyada tan iyo caruurnimadeyda, markii aan fursad u helay inaan halkan imaado, wax sahlan ayey ii hayad inaan ka fikiro”.
Intaas kaddib Frenkie de Jong ayaa wuxuu ka hadlay mustaqbalka saaxiibkiis hore ee kooxda Ajax ee Matthijs de Ligt wuxuuna yiri:
“Waan filayay in la i weydiin doono su’aal ku saabsan isaga, waxaan jeclaan lahaa inaan halkaan ku arko, laakiin go’aanka kama dambeysta ah waxaa iskaleh isaga iyo wakiilkiisa”.
Intaas kaddib De Jong ayaa wax laga weydiiyay guushii Ajax ay kaga gaartay kooxda Real Madrid tartanka Champions League xili ciyaareedkii hore wuxuu yiri:
“Aad ayaan ugu faraxnay in Real Madrid aan ka reebno tartanka Champions League”.
Arrinta ku saabsan Lambarka uu u xiran doono kooxda Barcelona kaddib markii lagu soo bandhigay maaliyad bilaa lambar la’aan ah ayaa wuxuu yiri:
“Lambarka 21-aad waa mid gaar ii ah aniga ahaan, waa No. aan ku faraxsanahay laakiin waan arki doonaa”.
“Waxaan dalabyo badan ka helay kooxo kale, balse inaan u saxiixo heshiis cusub kooxda Barcelona waxaan kaga mahadcelinayaa Josep Maria Bartomeu, wuxuu ii muujiyay sida weyn uu ugu kalsoon yahay awoodeeda ciyaareed iyo inuu aaminsan yahay guusheyda, waxaan ugu mahadcelinayaa joogitaankeyga halkan”.
Si kastaba ha ahaatee, xiddiga khadka dhexe reer Holand ee Frenkie de Jong ayaa heshiis 5 sano ku sii heyn doono garoonka Camp Nou u saxiixay kooxda Barcelona.
Kulamada caawa la ciyaari doono wareega 16-ka Koobka Qarammada Afrika 2019, iyo saacadaha ay soo galayaan
Kooxaha Manchester United iyo Arsenal oo si xoogan ugu dagaalamaya xiddig ka tirsan Barcelona